Ingqungquthela Ngokuphathelele Ubandezelo - Umthandazo Ekubandezelekeni Kwam uThixo
Umthandazo Ukubandezeleka KwaThixo
Umbongo wobuKrestu wobuQala ngokuphathelele ukuhlupheka
"Umthandazo Ekubandezelekeni Kwam UThixo" ngumbongo wokuqala wamaKristu obhalelwe abo babandezeleka entlungu, isilonda kunye nokugula.
O Msindisi wobomi bam,
Ngaba uya kudibana nam ekufeni kwam?
Mhlanguli wam ithemba,
Ngaba uya kundikhulula kwingozi yam?
O Mphilisi wam mphefumlo,
Ngaba uya kuphilisa zonke izifo zam?
Xa ndikhala, ndikhala
Ngaba uyayikhathalela intlungu yam?
Xa ndizama, ndizama ukuhlala
Ngaba umile kwaye unikele ngesandla sakho?
Xa ndiyeka, ngamaphupha aphukileyo
Ngaba uthabathe zonke iziqwenga?
Owuphulaphule yonke imithandazo yam,
Ukuthula kunye nokuthuthumela ndilindele impendulo yakho.
Mthu thuzeli wam intliziyo ephukileyo,
Ngobusuku bodwa ndifuna ukuvuselela.
Mncedi wam amandla,
Ngomthwalo ongenakulibaleka ndifuna uxolo lwakho.
O Menzi wamazulu nomhlaba,
Ndingambiza ngokuba nguThixo wam?
Nangona andizange ndikwazi igama lakho,
Nangona ndenze izinto ezihlazo,
Nangona ndathi ndikungcatsha kwaye ndibaleke kanye.
Kodwa ngaba uya kuxolela ngenxa yezinto zam ezimbi?
Ngaba uya kundinceda xa ndifikelela kuwe ngam izandla amancinci?
Ngaba uya kunika uxolo nangona silwa nabo bonke ubomi bethu?
Abantu bathi ubeka imithetho,
Kodwa ndiyazi ukuba uyamthanda ngokwenene.
Xa abanye begweba iifotyi zam,
Uya kwintliziyo nentliziyo yam.
Xa indlela yam iqhubela kwiimvula zamnyama,
Uya kukhanyisa amehlo am.
Xa ndiwela phantsi,
Uya kundinyusela ukuba ndiphakamise.
Xa ndijamelana nobunzima nokugculelwa,
Siza kubelana sabelo sethu.
Xa ndijamelene neengxaki zokugula,
Siza kulwa kunye nomoya ngamnye.
Xa ndilahlekile ndedwa ndihlala,
Uya kuba nam, uze undikhokele ekhaya.
Ngenye imini ndiya kufa ndihambe,
Kodwa ndiyakholwa ngokwenene
OwuThixo, uMsindisi wethu, mamela umthandazo wethu.
Gcwalisa indlala yethu, siphilise ukugula kwethu,
Thu thuzela imiphefumlo yethu.
Ukuba unqwenela ukuphendula,
Emva koko nceda silinde,
Ngenxa yokuba sizakuvala amehlo ethu.
Le nkondlo / umthandazo kuthi sonke esiphila ekuguleni, ukulimala, ukuhamba, ukuzodwa, ukuzisola okukhulu, ukuhlazeka, kunye neemeko ezingathembeki kweli hlabathi. Ukukhala okubuhlungu kokufa, umthandazo womntu, kuyisicelo esiphuthumayo, kodwa ngandlela-thile kwaye ngezinye izihlandlo uphendula ngokuthula.
Sinemithandazo efuna ukuphendulwa, kodwa siyadideka 'ngokuthula.' Izifundo zokuthobela nokunyamezela indlela esilinga ngayo ukuqonda ukuthanda kukaThixo, kodwa ndikholelwa ukuba uThixo unathi ekuhluphekeni nasekuhluphekeni. Uphethe okungaphezulu kunokuba sinokukwazi. Ngoko ndibiza ngokuba nguThixo usizi lwethu.
Iminye imithandazo ayiphendula ngentando yakhe epheleleyo, engekho ngaso sonke isikhathi esiyicingayo. Kodwa kungakhathaliseki ukuba, uthatha isabelo sakhe entlungu, kunye nokufa kwethu, uyasusa. UThixo ukhona nathi ebomini nangona esifa.
Iimfundiso zeBhayibhile zeBhayibhile ezili-10
Imithandazo yomtshato yesampula yomtshato womKristu
I-Novena kuSt. Anthony ukufumana iNqaku elilahlekileyo
Ukutshata kwiVisa yohambo
Abalobi abahlanu base-Afrika nabamaMerika
Ukwakhiwa kwesakhiwo seZondlo - Isampula yokuYilwa kweZakhiwo
Top Rod Stewart Solo Iingoma zee-80s
7 iiFilimu zeClassic ezihamba kunye noCharlton Heston